လူတိုင်း သတိမထားမိကြတဲ့ နာမည်ကျော် Squid Game ဇာတ်ကားထဲက ရိုက်ကွင်းအလွဲများ - Shwe Khit Online TV
HomeEntertainmentလူတိုင်း သတိမထားမိကြတဲ့ နာမည်ကျော် Squid Game ဇာတ်ကားထဲက ရိုက်ကွင်းအလွဲများ
November 12, 2021 Yan Entertainment 0
အခုတစ်ခါ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ Squid Game ဇာတ်ကားထဲက ရိုက်ကွင်း အလွဲလေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို အလွဲလေးတွေ ပါမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ နံပါတ်တူ နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ( ၂ ) ယောက်
Squid Game ဇာတ်ကားထဲမှာ ဂိမ်းကစားဖို့ ပါဝင်တဲ့ လူဦးရေက ၄၅၆ ယောက်ရှိပြီး ကစားသူတွေ မှာ ကိုယ်ပိုင် နံပါတ် တစ်ခုစီ ရှိကြပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေ ရဲ့ နံပါတ်ကတော့ မလွဲပေမယ့် ကျန်တဲ့ ဧည့်သည် သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ နံပါတ်ကတော့ အနည်းငယ် လွဲနေတာလေးတွေ ရှိပါတယ် ။ ဥပမာ ပြောရရင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Player 061 ဟာ အစောပိုင်း တုန်းက အမျိုးသမီး ဖြစ်ပေမယ့် ထုတ်ပယ်ကြောင်း ပြသတဲ့နေရာမှာတော့ ဒီ နံပါတ်ကို အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံနဲ့ ပြခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ဇာတ်လမ်းထဲ မှာတင် ထီးပုံစံ ပြောင်းသွားခြင်း
Squid Game ဇာတ်ကားထဲက ဒုတိယမြောက် ဂိမ်းဆော့ရတဲ့ အခန်းမှာ ပါဝင်ကစားတဲ့သူတွေဟာ ပြထားတဲ့ ပုံစံ ( ၄ ) ခုထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုကို ရွေးချယ်ကြရပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ထူးခြားတာက နံရံ ပေါ်က ထီးပုံစံ ဟာ အစောပိုင်းတုန်းက ပုံတစ်မျိုး ဖြစ်ပေမယ့် နောက်တစ်ခါ နံရံ နေရာကို ပြန်ပြတဲ့ အချိန်မှာတော့ ထီးမှာ လှိုင်းအတွန့်လေးတွေ ထပ်ပြီး အပိုပါလာတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ပုံစံ ပြောင်းသွားတဲ့ ဖုန်း
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ ဇာတ်ကား ရဲ့ နောက်ဆုံး အခန်းမှာ မင်းသား Gi-hun က Samsung Galaxy S7 ဖုန်းနဲ့ ပြောနေတာကို ရိုက်ကူးထားတာပါ ။ ဒါပေမယ့် လေဆိပ်ထဲမှာ လေယာဉ် စောင့်နေတဲ့ အခန်းကို ပြသတဲ့ အခါမှာတော့ မင်းသား ကိုင်တဲ့ ဖုန်းက S7 မဟုတ်တော့ပဲ S3 ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ ဒီအခန်းလေးကို ပရိသတ် အတော်များများက သတိထားမိခဲ့ကြပြီး ရှုတင် တာဝန်ခံ အနည်းငယ် လွဲသွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးထားကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ဖုန်းနံပါတ် အစစ်ကို သုံးထားတဲ့ Business Card
Squid Game ရဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဂိမ်းထဲကို ပါဝင် ကစားချင်ရင် ဆက်သွယ်ဖို့ Business Card ပေးတဲ့ အခန်းလေးကို မှတ်မိကြမှာပါ ။ ဒါ့အပြင် ကတ် ထဲက ဖုန်းနံပါတ် ကိုလည်း အသေအချာ ရိုက်ပြထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ကယ်တော့ Business Card ထဲက ဖုန်းနံပါတ်ဟာ တစ်ကယ့်အပြင်က တောင်ကိုရီးယား အမျိူးသမီး တစ်ဦး ကိုင်ဆောင်နေတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်နေပြီး ဇာတ်ကား အောင်မြင်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူမ ဖုန်းနံပါတ်ဆီကို နောက်ပြောင် တဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ နဲ့ စာပို့တာတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ အမျိုးသမီးက ပြောပြထားပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Netflix ဟာ ဖုန်းနံပါတ် ပါနေတဲ့ အခန်းကို ပြန်လည် တည်းဖြတ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ နံရံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဂိမ်းကစားနည်းများ
Squid Game ဇာတ်ကားထဲက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး အခန်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ဘယ်လို ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေ ပါမလဲဆိုတာကို မသိကြတာပါ ။ ဒီအထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကစားသမားတွေဟာ ဂိမ်းတစ်ခုပြီးတိုင်း ဘယ်လို ဂိမ်း အမျိုးအစား ထပ်လာမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းရတာကိုက ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုလို ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းကတော့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေ အကုန်လုံးရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံတွေကို ကစားသမားတွေ အိပ်စင် နံရံ မှာ ဖော်ပြပေးထားတာပါ ။ ဒီသရုပ်ဖော်ပုံတွေမှာဆိုရင် “Red Light, Green Light” ဂိမ်းက စလို့ ကျန်ဂိမ်းတွေရဲ့ ပုံတွေကို ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစောပိုင်းတုန်းက ကစားသမားတွေရဲ့ အိပ်စင်နဲ့ ကွယ်နေတာမို့လို့ မမြင်ရပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်း လူအတော်လေး လျော့သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ ။shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ နာမည်ကြီး Squid Game ဇာတ်ကားထဲက ရိုက်ကွင်းအလွဲ တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်များကြားမှ အသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကံအကောင်းဆုံး လူ ( ၅ ) ဦး